» वडालाई समृद्ध बनाएरै छाड्छु : खड्का
वडालाई समृद्ध बनाएरै छाड्छु : खड्का
१६ चैत्र २०७५, शनिबार ०८:३५
२०२९ साल फाल्गुन ५ गते ललितपुर जिल्लामा जन्मिएका दीपक खड्का हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १४ वडा अध्यक्ष हुन् । स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा केहि समयअघि माओवादीमा प्रवेश गरेका खड्काले तत्कालिन माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार भएरनै चुनाव जितेका हुन् ।
उनी भन्छन्, आफु कडा मेहेनतका साथ लाग्नुपर्छ जहाँपनि सफलता प्राप्त हुन्छ । छोटो समयमै मैले वडावासीको मन जित्न सफल भए र अहिले म यहाँ छु । उनी भन्छन्, मलाई भोट दिएर यहाँसम्म ल्याउनु भएका जनतालाई वडा अध्यक्षको हैसियतले विकास निर्माणका कुराहरु दिनुनै मेरो पहिलो दायित्व हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडाअध्यक्ष दीपक खड्कासंग नवयुग डटकमका लागि मानवी बानियाँले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
वडा नम्वर १४ लाई समृद्ध बनाउन के के योजनाहरु बनाउनु भएको थियो र ती मध्ये के— के योजनाहरु सफल भए?
हामीले यस १४ न वडालाई पर्यटक वडा बनाउने लक्ष्य लिएका थियौं । त्यसको लागि कामहरु भईरहेको छ । डाईभड डाँडामा भ्युटावर राख्ने योजना बनाएका थियौं लगभग त्यो योजना अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि काममा परिणत हुने छ । त्यस्तै हेटौंडा गर्मीमय क्षेत्र भएको कारणले पनि हामीले एउटा कन्चन पानि सहित ताल निर्माण योजनालाई पनि अघि सारेका छौ भने, त्यसको नजिकै पिकनिक स्थल पनि बन्ने छ । यस वडामा तमाम जनजाती बस्ने हुदाँ होमस्टेको पनि अवधारण बन्दैछ । चौधरी यरियामा चौधरी होस्टे भनेजस्तै यहाँ पनि तमाङ होमस्टे हुनेछ त्यहि पनि हाम्रो पालमानै । यस योजनाहरु अनुसारनै हाम्रो काम भईरहेको छ ।
यस वडा बासीलाई घर—घरमा सिंहदरबार आएको महसुस गराउन सक्नु भएको छ त ?
त्यो विल्कुलै छैन् । अब वडामा नै आएको छैन् सिंहदरबार, घर—घरमा आउने त कुरै भएन । केन्द्रिकृत राजनीतिले गर्दा यो नारा कार्यमा पुरा हुन अलि गाह्रै छ । जनताले साँच्चिकैको रुपमा महशुस गर्न समय लाग्छ । हाम्रो तर्फबाट हुने कामहरु भईरहेको छ । यस वडामा अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक घरको दैलोमा वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ । अहिले वडाले दिने सेवामा पनि कन्जिुस्याई छै्रन् । जसरी हुन्छ, हामी जनता खुसि बनाउन लागिरहेका छौं ।
सजिलै भयो । कार्यसमिति पनि आफ्नै पार्टीको भएको कारणले पनि सजिलो भएको महशुस गरे । झन् पार्टीको एकिकरण पनि भयो, नगरपालिकाबाट पनि राम्रै सहयोग पाँहिरहेका छौ । काम गर्नलाई त्यत्ति धेरै कठिनाई छैन् ।
हाम्रो यस वडा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको दोस्रो फेज आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गरेर यहाँका युवालाई रोजगार मुलक तालिमहरु दिने काम हुदैछ । हामी आईसकेपछि युवा पुरुषलाई प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन तालिमहरु दिसकेका छौ भने, महिला युवालाई डल्स, कुशन, टपरि तथा सिलाई बुनाईको तालिमहरु सम्पन्न गरिसक्यौ । यस वडामा युवाहरुलाई सिपमुलक तालिमहरुको सञ्चालन गरिरहेका छौ ताकी कोहि पनि बेरोजगार बन्न नपरोस् भनेर ।
तपाईले डाईभट डाँडामा भ्यु टावर बनाउने भन्नु भयो । यसको बारेका केहि कुरा राख्दिनुन ।
यस डाईभट डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने मेरो चुनावी नारामा पनि थियो । यस डाँडा चुरेको पनि नजिक पर्ने र हाईवयको पनि नजिक पर्ने र हेटौंडा बजार अवलोकन गर्ने तरिकालाई काम कुरो अघि बढीरहेको छ । यसपालि यसको लागि कन्सेप्ट तयार गर्ने र नक्साहरु तयार गर्ने कार्य पुरा भयो । अब केन्द्रिय सरकारदेखि प्रदेश सरकार तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई पहल गर्ने छौ । हामीले यस भ्युटावरको लागि ३५ लाखको स्टुमेट निकालेका छौ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ यस भ्युटावरको शिल्यान्यास गरेर कम्तिमा पनि दुईपर्ष भित्रमा सकाउने योजना छ ।
मेरो अवधिभर १४ न वडालाई शान्ति विकास निर्माणको केहि योजनाहरु र त्यहाँका जनताहरुलाई हसिँलो अनुहार बनाउने चहाना छ । हामीले कर्म गर्ने हो फलको आश गर्न मिल्दैन् । जनताकै काममा भनेर हामी दौडिरहेका छौं । यो मेरो समय अवधिभर शिक्षा स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा केहि योगदान पुराँउछु र वडाबासीलाई समृद्ध बनाउने मेरो प्रमुख लक्ष्य हो त्यो गरेरै छोड्छु ।
अपडेटः राक्सिराङ दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो